XOG+AKHRISO: 3 Sababood oo ay Kenya u dalbanayso In Dacwadda Badda dib loo dhigo & Somalia oo dhagarta fahamsan.
NAIROBI(P-TIMES) – Warar laga helay dhinaca Diblumaasiyadda ayaa daaha ka rogaya in ay Kenya shalay warqad u dirtay Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ee ICJ oo ay kaga codsanayso in kiiska dhageysiga dacwadda Badda ee kala dhaxaysa dib loo dhigo mudo ay ku diyaar-garoobi karta oo ah ugu yaraan 12 bilood, si ay iskugu diyaariso dhageysiga ugu dambeeya ee maxkamadda.
Dawladda Soomaaliya oo ogolaatay arrintaas ayaa dhankeeda warqad rasmi ah u dirtay Maxkamadda oo ay ku cadeynayso in aysan ogoleyn in markale dib loo dhigo dacwadda dhageysigeeda, taasna ay tahay mid ay Soomaaliya diyaar u tahay.
Warar laga helay Wasaaradda Arrimaha dibada ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ay Soomaaliya horeysay u haysay xogta iyo damaca Kenya ay ku doonayso in ay ku xagal-daaciso dacwadda dhageysigeeda ama kulanka bilaabanaya 9-ka bishan.
Sadex qodob oo muhiim ah ayay Kenya ka leedahay in ay dib u dhigto dacwadda Badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya, waxayna yihiin kuwa ay u aragto in ay faa`iido u yihiin dhankeeda.
Mudo laga joogo 20 maalmood Qareenada Kenya u qaabilsan dacwaddan waxay sheegeen in ay si toos ah isku casili doonaan marka ay maxkamadda dhageysigeeda ka dhiman tahay wax ka yar 10 maalmood, taas oo ay fuliyeen sida ay sheegayaan warar hoose oo la helayo.
Madaxweynaha Kenya ayey la kulmeen oo ay u direen dhambaal ay ku codsanayaan si kiiskan loogu guuleysto in wada hadal ay gasho Soomaaliya in ay tahay in uu waqtiga dheereeyo, waxayna xaqiiqsadeen in laga gar leeyahay.
Sadexda arrimod ee ay Kenya doonayso in ay mudada u dheerayso ayaa kala ah.
In ay ka shaqeeyaan in Is jiid-jiidka labada dal gaaro marxalad kala gurka ee Soomaaliya, ka dibna ay la macaamilaan dawladda Soomaaliya ee dhalan doonto 2021-ka, iyagoo saameyn xoog badan ku yeelanaya doorashada oo ay lacago badan ku bixin doonaan.
In wadamada Geeska Afrika iyo kuwa Midowga Afrikaba ka dhameeyaan in dacwadda kala dhaxaysa Soomaaliya laga soo wareejiyo Qaramada Midowbay, oo lagu dhameeyo Afrika gudaheeda, taas oo faa`iido gaar ah ugu jirto.
Iyo In ay xiligaas wada hadal ku raadiyaan iyo xal siyaasadeed oo ay la galayaan Soomaaliya, taas oo ay horey uga waayeen dhammaan Xukuumadihii Madaxweyne Xassan Sheekh iyo Madaxweyne Farmaajo.
Sidda muuqata hungow Kenya ee arrimaha Maxkamadda ICJ waxay ka dhigan tahay guul Soomaalidu ay gaartay, waxaana la sugayaa talaabooyinka kale ee ay Kenya qaadi doonto.
Saacado ka hor Soomaaliya, waxay ka baxday kulanka Midowga Afrika ee golihiisa Ammaanka oo ay Kenya geysay qaraarka ah in dacwadda Badda lagu xaliyo Afrika gudaheeda, laakiin Soomaalida ayaa kalfadhigan ka baxday.